Lunacy dia mpamoaka sary hafa amin'ny .sketch | Famoronana an-tserasera
Lunacy dia tonian-dahatsoratry ny sary izay tsy azonao adinoina amin'ny fiasana amin'ny rakitra .sketch
Manuel Ramirez | | maro, Cartoon vector
Lunacy dia tonga amintsika avy amin'ny fivarotana Windows 10 ofisialy mba hahafahanao miasa miaraka amin'ireo karazana rakitra toy ireo .sketch. Anisan'ireo mampiavaka azy tsara indrindra ny fahaizany miasa miaraka amin'ny vohikala, sary miaraka amin'ny sarontava ary karazana sary rehetra.
Rindrambaiko iray anananao avy amin'ny magazay Windows 10 na izy tenany azonao sintonina ho azo ampiharina hananana azy ivelan'ny fotoana rehetra. Fitaovana izay nitady ireo fiasa rehetra ireo mba hahatonga azy io ho fitaovana ho an'ny hafa.
Ankoatra ny fahaizana miasa miaraka amin'ny fisie .sketch, izay teny an-dalana taloha nanana an'ity vaovao ity avy any UXpin, manome antsika fotodrafitrasa marobe hiatrehana rakitra fisarihana, handamina pejy, hanatevin-daharana sy hampifanaraka zavatra na hampiasa fitaovana typografia amin'ny fomba mitovy.
Tsy misy koa ny fampitahana fahaizana manondrana rakitra ao amin'ny PNG sy SVG, na koa fandaharana miaraka amina kaody CSS sy XAML mba hahazoana tombony betsaka amin'izany. Ary izahay dia miresaka momba ny vahaolana amin'ny fanitsiana izay na dia avy amin'ny tranokalany aza dia mamela anao "hangataka" fiasa vaovao hapetraka hiasa amin'izy ireo.
Lunacy dia noforonin'ny orinasa sary masina ao ambadiky sy sary 8 ary manolotra antsika ny fahaizana mametraka azy ao amin'ny Windows 10 ka 15 habaka fotsiny no angatahiny. Andian-toetra tsara iray hafa ny famakiana rakitra tapaka amin'ny PSD, fitehirizana azy ireo ao anaty .sketch ary koa ny famoronana ny asa vita hitondrana azy any amin'ny CDN.
Una fitaovana tena ankehitriny tsy manadino ireo antsipiriany takian'ireo mpamorona ireo ary apetrany amin'ny toerana manan-danja kokoa hanarahana ny lalana izy ireo. Tsy ny Adobe no zava-drehetra, noho izany dia mila mailo hatrany ianao amin'ireto andiana vahaolana ireto fa amin'ny asa sasany dia afaka manampy antsika tsy hamaky ilay boaty ary hametra ny tenantsika hampiasa azy io maimaim-poana.
Midira amin'ny Lunacy 4.0 avy amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Lunacy dia tonian-dahatsoratry ny sary izay tsy azonao adinoina amin'ny fiasana amin'ny rakitra .sketch
Andramo izay fantatrao momba ny loko amin'ity quiz nentanim-panahy avy amin'i Wassily Kandinsky ity
Luminar Cloud dia manatsara ny sarinao amin'ny intelligence Artificielle batch